TCL Android O FHD Smart 43-Inch LED TV TCL43S6500 ~ ICT.com.mm
HomeTCL Android O FHD Smart 43-Inch LED TV TCL43S6500
TCL Android O FHD Smart 43-Inch LED TV TCL43S6500
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Display Size (inches): 43″ TV Resolution: Full HD (1080p/1920 × 1080) TV Technology: LED Refresh Rate: 60Hz Power Supply: 100V-240V Input: HDMI 2.0 with HDCP2.2, USB(midea player, RF, Composite,... [Learn more]
Brand: TCLSKU: 151357N/ASee more: Lifestyle, Products, Recent Updates, Shop, TCL, TV & EntertainmentFilter by: Televisions
TV Resolution: Full HD (1080p/1920 × 1080)
Input: HDMI 2.0 with HDCP2.2, USB(midea player, RF, Composite, Headphone Jack, Ethernet
Other Function: Google Assistant, Youtube, Netflix
Dimension(W×D×H): 38.2 × 24.5 × 7.6 inches
TCL အမှတ်တံဆိပ် Full HD Android စမတ်တီဗွီ ဖြစ်ပါတယ်။ မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား (၄၃”) ဖြစ်ပြီး Resolution အားဖြင့် 1920x1080 resolution ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Resolution မြင့်မားတဲ့အတွက် မိမိအကြိုက်ဆုံး ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွေနဲ့ အားကစားပွဲစဉ်တွေကို ကြည်လင်တောက်ပတဲ့ ရုပ်ထွက်နဲ့ ကြည့်ရှုနိုင်မှာပါ။ HDR ပါဝင်တဲ့အတွက် Night Scene တွေများတဲ့ ဟောလိဝုဒ်ဇာတ်ကားတွေ ကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာ အလင်းအမှောင်အနေအထားကို အရောင်သဲသဲကွဲကွဲနဲ့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ LED Display နည်းပညာကို အသုံးပြုထားပြီး Screen Refresh Rate – 60Hz ဖြစ်တဲ့အတွက် မြန်ဆန်တဲ့ပုံရိပ်တွေကို ဝေဝါးမှုမရှိဘဲ ပြသပေးနိုင်ပါတယ်။ AI နည်းပညာပါဝင်တဲ့အတွက် Google Assistant ကိုအသုံးပြုပြီး အသံဖြင့်ခိုင်းစေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Android စမတ်တီဗွီဖြစ်တဲ့အတွက် ဝိုင်ဖိုင်အင်တာနက်ဖြင့် ချိတ်ဆက်ပြီး Youtube, Netflix တို့လို တီဗွီစီးရီး Apps တွေကို ကြည့်ရှုနိုင်မှာပါ။ Set-top box နဲ့ DVD စက်၊ ဂိမ်းစက်တွေကို HDMI 2.0 နဲ့ ချိတ်ဆက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ External Hard Drive နဲ့ Memory Stick ထဲမှာ သိမ်းဆည်းထားတဲ့ဇာတ်ကားတွေကို အလွယ်တကူချိတ်ဆက်ကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ USB ပေါက်လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ အသံပိုင်းမှာ စတီရီယို ပတ်လည်အသံထွက်စပီကာတွေကို တပ်ဆင်ပေးထားပြီး ပြင်ပစပီကာတွေနဲ့ ချိတ်ဆက်နိုင်တဲ့ နားကြပ်ပေါက်လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ Ethernet လည်း ပါဝင်တဲ့အတွက် အင်တာနက်ကေဘယ်ကြိုးဖြင့်လည်း ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ပါးလွှာသပ်ရပ်ရိုးရှင်းတဲ့ အနက်ရောင်ကိုယ်ထည်ဒီဇိုင်းနဲ့ ထုတ်လုပ်ပေးထားပါတယ်။
HDR delivers greater picture contrast, enhances image details and brings vivid colors to life.It is an upgrade to the current TV programming signal-standard. By usingaunique algorithm,the TV panel backlight is adjustedautomatically and dimmed to boost the peak brightness of on-screen objects, consequently deliveringamuch wider brightness range.
Android TV bringsaworld of content to your biggest screen.With the Google Assistant built in, you can quickly access entertainment, get answers,and control devices around your home. Find the latest blockbuster, check the score of the big game, or dim the lights.
Total price:K647,567 K623,741
This item: TCL Android O FHD Smart 43-Inch LED TV TCL43S6500 K588,000